RFID ကင်းလှည့် Locator Button လေး, ကင်းလှည့်ပြန်ကြားရေးပွိုင့်
အခြားအ Dedicated Tag ကို, စမတ်ကင်းလှည့် Electronic Patrol Point, Patrol Address Button, Patrol Button, Patrol Information Button, ကင်းလှည့်ပြန်ကြားရေးပွိုင့်, Patrol Tag, RF Patrol Locator Button, RFID Patrol Information Point, RFID Sensor Patrol Point, Smart Patrol Locator Button, Smart Patrol Locator Tag
operating အကြိမ်ရေ: 125kHz / 13.56MHz / 860 ~ 915MHz
ရရှိနိုင် chip ကို: EM4100, EM4102, NTAG203, EM4450, TK4100, T5557, Hitag1, Hitag2, HitagS, Mifare 1k S50, Mifare S70 4K, Ultralight 10, DESFire41, ငါကုတ် SLI ကို, Ti2048, Ti256, SR176, INSIDE2K, LRI2K, LRIS2K နှင့်လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ဂြိုလ်သား h3, Monza impinj 4, စသည်တို့ကို.
ပြင်အချင်း: 20မီလီမီတာ, 25မီလီမီတာ, 30မီလီမီတာ, 35မီလီမီတာ, 40မီလီမီတာ, 52မီလီမီတာသို့မဟုတ်ထုံးစံ
အထူ: 3မီလီမီတာ / 5mm
protocol စံ: ISO14443A，ISO14443B，ISO15693，ISO18000-6C，ISO18000-6B
ပစ္စည်း: ကို ABS, PPS
Operating အပူချိန်: -20℃ ~ + 95 ℃
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -20℃ ~ + 90 ℃
ဝန်ဆောင်မှုဘဝ: >10 နှစ်ပေါင်း
အသိအမှတ်ပြုမှုအကွာအဝေး: 2~ 100cm (အဆိုပါ RFID ချစ်ပ်အမျိုးအစားများနှင့်စာဖတ်သူအင်တင်နာသည်နှင့်အညီ)
အရောင်: အနက်ရောင်, အဖြူ, ဝါသော, အနီရောင်သို့မဟုတ် optional ကို
အလေးချိန်: 3~ 8g
RFID patrol location button is usually ABS shell, there are RFID chips, and filled epoxy resin, ultrasonic ဂဟေ. Product appearance small and exquisite, ကြာရှည်ခံသော, fade, အပူချိန်မြင့်, ရေစိုခံ, shockproof, Anti-ချေး.
LF, HF, UHF and other chips can be packaged on demand, composite package, the surface can print ID code, sequence number for patrolling, security inspection, trees, တိရိစ္ဆာန်များ, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ကားရပ်ခြံ, identity certification, Attendance Management, လက်မှတ်တွေ, Vehicle Management, Equipment Identification, Logistics Management, Fixed Asset Management Product Identification, စသည်တို့ကို.
I am interested in your product RFID Patrol Locator Button, ကင်းလှည့်ပြန်ကြားရေးပွိုင့်
prev: RFID အသေးစားပလတ်စတစ်-coating Tag ကို, တူရိယာပစ္စည်းအီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု RFID Micro နဲ့ Tag ကို
နောက်တစ်ခု: အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်စနစ် Dedicated Tag ကို, အဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု RFID Tag ကို, ETS သို့တစ်နေ့လျှင်